सांसद योगेश भट्टराईको एउटै `स्टाटस´ ले देशै भर चर्चा ! यस्तो थियो भट्टराईको चर्चित `स्टाटस´ ? – Setosurya
काठमाडौ । आइतबार संघीय सांसदको सपथ जानुअघि नै एमाले सचिव योगेश भट्टराईले सार्वजनिक रुपमा कसम खाए । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले आफ्नो कसम सार्वजनिक गरेका थिए ।
उनले फेसबुकमा लेखेको स्टाटस एकाएक भाइरल भयो । देश भरका अनलाइन मिडिया तथा सोसल साइटमा उनको स्टाटसको समाचार बन्यो । एमाले प्रचार बिभागका प्रमुख समेत रहेका भट्टराईले देश र जनताका नाउँमा फेसबुक तथा ट्विटरबाट कसम खाए ।
‘प्रतिनिधिसभा सदस्यको सपथग्रहणमा जानु अघि सबैका सामुन्ने म कसम खान्छु’, योगेशले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘जिन्दगीभर राष्ट्र र जनताको हितमा लागिरहने छु, जानीबुजी राष्ट्र र जनताको अहित हुने कुनै काम गर्ने छैन ।’
आइतबार साँझ संघीय सांसदको सपथ खानुअघि नै योगेशले यस्तो कसम खाएका हुन् ।
सरकारमा १८ मन्त्री थपिँदै, कांग्रेस र माओवादीले टुंग्याए मन्त्रीको नाम
नेपाल आइडलमा दोस्रो भएपछि भावुक हुँदै निशानले यस्तो दिए प्रतिक्रिया……
यात्रा समाजवादको, यात्री नेताका आफन्त !
पत्रकार घायल प्रेस काउन्सिल सशक्त सञ्चारकर्मी पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मानित
आफु र्निदोष हुनलाई यसो भन्छन पूर्व डिआईजी सिलवाल (भिडियोसहित)